गोर्खा विषय हाम्रो हो तर अक्षय कुमारले किन फिल्म बनाए ? « Etajakhabar
गोर्खा विषय हाम्रो हो तर अक्षय कुमारले किन फिल्म बनाए ?
काठमाडौं । वैशाख १ गते अनमोल केसी र सुहाना थापा अभिनित फिल्म रिलिज हुँदैछ । फिल्मको प्रमोशनका लागि दुई कलाकार अहिले ब्यस्त छन् । उनीहरु विभिन्न मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै आएका छन् । अहिले वैशाख १ हुने फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ र दक्षिण भारतीय (साउथ) फिल्म ‘केजीएफ च्याप्टर २’ संग जुधाएको भन्दै चर्चा भएको छ ।
फिल्म नजुधाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सल्लाह निर्माण पक्षलाई दिइएको थियो तर फिल्म निर्माता झरना थापाले नेपाली फिल्मलाई नेपालीले माया गर्ने भएकाले आफ्नो क्षमता र मेहनतमा विश्वास भएको प्रतिकृया दिएकी थिइन् । त्यस्तै अनमोल केसीले पनि आफुलाई चुनौती राम्रो लाग्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय नेपालमा साउथ फिल्मको दबदबा बढेको र हल सञ्चालकले नेपाली फिल्मलाई विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।
ठूला मल्टिप्लेक्सले ‘केजीएफ(२’लाई ७५ शो दिएर नेपाली फिल्मलाई मुस्किलले दुई दर्जन मात्रै शो दिएर विभेद गरेको आरोप उनीहरुको छ । केही निर्माताले त विदेशी फिल्मलाई कडाइ गर्न माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
यस्तोमा ‘ए मेरो हजुर ४’का अभिनेता अनमोल केसीलाई पनि निकै दवाव परेको छ । करिब दुई वर्ष सम्म फिल्म क्षेत्रवाट टाढा रहेका उनको लागि यो फिल्म एउटा आफुलाई प्रमाणीत गर्न एक चुनौती पनि हो । तर उनले हालैको एक अन्तर्वार्तामा नेपाली फिल्मको वास्तविक प्रतिस्पर्धा हलिउड र बलिउडसँग रहेको बताउँदै सबैजना एक हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।
नेपाली कथावस्तुमा समेत विदेशीले फिल्म बनाउन थालेको प्रति उनको गुनासो छ । त्यसैले नेपाली फिल्म विदेशी फिल्मको डोमिनेशनमा परेको उनको भनाई छ । उनले उदाहरणका लागि गोर्खा इतिहास र कन्टेन्ट नेपालको भएपनि अक्षयकुमारले त्यसमाथि फिल्म बनाएको भन्दै टिप्प्णी गरे ।
‘गोर्खा त हाम्रो सब्जेक्ट हो नि त । तर हामीले किन बनाउन सकेनौं, अक्षयकुमारले किन खेलिरहेको छ गोर्खा सब्जेक्टमा ? बजेटको हिसाबमा हामीले त्यो बनाउनै सक्दैनौं, तर कन्टेन्ट त हाम्रो हो नि । किन हाम्रो देशले बनाउन सकेन ? यस्ता चीजले गर्दा डेमिनेटेड चाहिं छ,’ अनमोलले भनेका छन् ।
पछिल्लो समय अनमोल, सुहाना थापा, निर्देशक झरना थापा र निर्माता सुनिलकुमार थापाले नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रभुत्वबारे खुलेर बोलिरहेका छन् ।